နည်းပညာသည် Bug Bug ကဲ့သို့အလွန်ထူးဆန်းသော Stimuli - Porn On Your Brain
နည်းပညာဘာဂ်လိင်လိုပဲဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်: Supernormal လှုံ့ဆော်မှု
NIR Eyal အတွက်အားဖြင့် အသုံးပြုသူများသည်
ယခုတပတ်ကလူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ Las Vegas မှာနှစ်စဉ် Consumer Electronics Show ကိုပွားစှာမှေးဖှား။ အထက်မှရှာဖွေနေ, အခင်းဖြစ်ပွားရာနောက်ဆုံးပေါ်မဖြစ်မနေ-ပါပြီတစ်အုံထဲမှာထု scampering တစ်ဦးအင်းဆက်ပိုးမွှားကျခြင်းတူ။
[မှတ်ချက် - ဤဆောင်းပါးသည် ၅ နှစ်သာရှိသေးသည်၊ သို့သော်အထက်ပါဗီဒီယိုကိုထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်။ ] နည်းပညာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှုပ်ထွေးသောဆက်နွယ်မှုကိုစဉ်းစားသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သော bug တစ်ခု၊ အထီး julodimorpha ပိုးတောင်မာ၏အခြေအနေကိုပြန်သုံးသပ်ရန်အသုံးဝင်သည်။ တစ်ခါတလေမကောင်းတဲ့အရာအလုံအလောက်မရနိုင်ဘူး သူ၏နေရာလွဲလိုသောဆန္ဒသည်အလွန်အင်အားကြီးမားသဖြင့်သူ၏မျိုးစိတ်များဆက်လက်ရှင်သန်ရေးကိုခြိမ်းခြောက်နေသည်။
လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်နေစဉ်, ယောက်ျားမတ်ေတာအတှကျရှာဖွေနေ, သြစတြေးလျ outback ၏ခြောက်သွေ့မြေပြင်စိစစ်သည်။ အဲဒီနှစျခုစရိုက်များ, အရွယ်အစားနှင့်အရောင်, မိမိအိမ်ထောင်ဖက်၏မျိုးဗီဇကြံ့ခိုင်မှုအကြောင်းကိုထူးခြားသောမွေးရာပါတွေကိုဖြစ်စေဝေငှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာရှာတှေ့နိုငျအကြီးဆုံး, reddest အမျိုးသမီးထွက်ရှာတတ်၏။ ရုတ်တရက်သူ့အိပ်မက်မိန်းကလေးတို့ရှေ့မှာသူ့ကိုနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်လေထုရပ်လိုက်နိုင်သည်။ သူကသူ့ကိုယ်သူ composes နှင့်အလှနျပူအလှတရားချဉ်းကပ်။
ဒါပေမယ့်မျိုးစိတ်အထီးပရိယာယ်အဘို့ကိုမသိရသည်။ မအင်္ဂါစိုက်ထူသူအရေးယူဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်မကြာမီသူမအပေါ်နိုင်သကဲ့သို့မိမိ lovemaking စတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူ၏ရိုင်းစိုင်းတိုးတက်လာငြင်းပယ်နေကြသည်။ သို့သော်သူကသူမဆန္ဒရှိသို့မဟုတ်မရှိမရှိ, သူမ၏ကျေနပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်သည်။ သူကအခြားသင့်လျော်သောအမျိုးသမီးအားဖြင့်သူ့ကိုလွန်သွားသကဲ့သို့သစ္စာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သူ reddest ထို့ကြောင့်ယင်းဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအမျိုးသမီးကိုသာအကြီးမားဆုံးလိုသည်။
သူသည်နေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖုတ်။ ဖြစ်စေ၊ သြစတြေးလျအာဏာပိုင်ပုရွက်ဆိတ်များကသူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖုံးအုပ်ကာခြေလက်များမှခြေလက်များကိုခွဲထုတ်ရန်စတင်သည်အထိသူသည် ဆက်လက်၍ ဆက်လက်ခုန်ပေါက်နေသည်။ နောက်ဆုံးသူလှပသောလှပသောဘီယာပုလင်းတစ်လုံးကိုခိုးယူရန်ကြိုးစားခဲ့သည်ကိုသူမသိဘဲသေဆုံး
တစ်ဦးက julodimorpha ပိုးနေတဲ့စွန့်ပစ်ဘီယာပုလင်း romances ။
အဆိုပါ julodimorpha ပိုးရန်, ဘီယာပုလင်းရဲ့အရွယ်အစား, အရောင်အသွေးနှင့်ချိုအောက်ခြေအမျိုးသမီးသှေးဆောငျတစ်ခု accentuated ဂျဖြစ်ကြသည်။ ဆိုးဝါးဆွဲဆောင်မှုသူ၏ပုံပြင်ကိုဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်တစ်ခုတိရိစ္ဆာန်ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဗီဇအတိုင်းဖို့အယူခံပေမယ့်အစစ်အမှန်အရာထက် သာ. တန်ခိုးကြီးတုံ့ပြန်မှု elicits ထားတဲ့ပုံကြီးချဲ့ features တွေ, ဖော်ပြရန်ဖို့ "supernormal လှုံ့ဆော်မှု" ဟုဒတ်ခ်ျနိုဘယ်ဆုရှင်ပျား Tinbergen အားဖြင့် 1930s အတွက်စတင်သုံးစွဲတဲ့အသုံးအနှုန်းအဖြစ်လူသိများသည်။ အဆိုပါအပြုအမူအများစုအထူးသ, များစွာသောမျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးမြင်ကြကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
Tinbergen မဟုတ်ဘဲမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်စားပေါ်ထက်ကြီးမားသောအတုကြက်ဥပေါ်မှာထိုင်ဖို့ရွေးချယ်သူကိုသေးငယ်တဲ့ Songbird နှင့်အတူစမ်းသပ်။ သူကပိုမျးကွုတျသူတို့ကိုမှန်ကန်ကျူးကျော်လိုခြင်းထက်အထီး stickleback ငါးတိုက်ခိုက်မှု redder ကျြလှညျ့ကိုမြင်တော်မူ၏။ သူလည်းမှန်မှန် technique ကိုအတူအခြားသူများကိုလှည့်ဖြားသောသူအချို့တိရိစ္ဆာန်များလေ့လာသည်။ ဥပမာ, cuckoo ငှက်ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးစိတ် '' အသိုက်ထဲမှာသူမ၏ကြက်ဥကိုတင်သောကြောင့်လူသိများသည်ငယ်ရွယ်သူမ၏အနည်းငယ်ပိုကြီးပြီးတောက်ပသောအရောင်ယုံကြည်မှုအိမ်ရှင်ငှက်အရူးမှထူးခြားသောမွေးရာပါတွေကိုဖြစ်နိုင်ဟုပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါသတိမရှိသောမိခင်ကသူမ၏ကိုယ်စားပေါ်၏အကြီးမားဆုံးထို့ကြောင့်ကျန်းမာရေးဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားခြင်း, ပိုကြီးတဲ့ cuckoo ယင်းအာဟာရမည်, အတောအတွင်းသူမ၏ကိုယ်ပိုင်အမျိုးအနွယ်ကိုအသေသတ်ခြင်းကိုငတ်။
ကျနော်တို့ Cuckoos လွန်းနေ
ကောင်လေးတွေ, ငှက်များနှင့်ငါး၏ပွောသမြှယုံကျီစယ်ခြင်းမပြုမီ, ငါတို့အစစ်အမှန်အရာထက် သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ရိပ်မိသည့်အရာများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အားနည်းချက်စဉ်းစားပါ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်နည်းပညာဆိုးရွားသောလွှမ်းမိုးမှု၏တူညီသောမျိုးအားနည်းချက်ကျွန်တော်တို့ကိုထွက်ခွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဇအတိုင်းထက်အများကြီးပိုမြန်ပြောင်းလဲပါပြီ။ သို့သော်ကပ်ပါးမျိုးစိတ်အားဖြင့် duped နိမ့်တိရစ္ဆာန်များနှင့်မတူဘဲလူသားတစ်ဦးအကျိုးအမြတ်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှ supernormal လှုံ့ဆော်မှုရောင်း။
ဟားဗတ်စိတ်ပညာရှင် Deirdre Barrett အဆိုပါ technique ကိုနည်းတူအများကြီးကအခြားတိရစ္ဆာန်များ၏ကြောင်းပြုသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ရပ်များသြဇာလွှမ်းမိုးပြောဆိုသော။ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်အမှန်တကယ်ကိုသင်သိဘာမှလုပ်နေသူအပေါင်းတို့ကိုကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲဆက်ဆံရေး၏အသီးဖျော်ရည်-up, ဗားရှင်း, ငါတို့ကိုကြီးထွားစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ခွင့်ပြု, ကွန်နက်ရှင်နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှု, ဖော်ကျူး။
ကျနော်တို့ဘဝပိုမိုရတာဟာနှင့်ရည်ရွယ်ချက်-မောင်းနှင်ဗားရှင်းများကိုထားတဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းအားဖြင့်ယစ်ပါတယ်။ အရုပ်, anime ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ဆန်တဲ့ချစ်စရာ၏အခြားတ္ထု - မင်္ဂလာပါ Kitty နှင့်အဖိုးတန်ခဏစဉ်းစား - ဝယ်ယူရန်နှင့်ထိုသူတို့အဘို့ဂရုစိုက်ဖို့ရောနှောကလေးများနှင့်အရွယ်ရောက်သွေးဆောင်ဖို့ကြီးမားသောမျက်စိနဲ့တူ Natal အကူအညီမဲ့၏ဇီဝအမှတ်အသားများ, ပြားချပ်ချပ်နှာခေါင်းနှင့်ကြီးမားသောဦးခေါင်းသုံးပါ။ အစာရှောင်ခြင်းအစာကိုသဘာဝတွင်အလွန်ရှားပါးသော, ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်အရသာနှစ်ဦးစလုံးသကြားနဲ့အဆီထူးခြားသောအရေအတွက်နှင့်အတူရောနှော။
သို့သော်ဖြစ်ကောင်းအသုံးအများဆုံး supernormal လှုံ့ဆော်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးမျိုးသောဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းတွေကနေတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိတ်ကပ်ထဲသို့ပိုမိုမကြာသေးမီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်သားပြင်ပေါ်သို့အစိတ်အပိုင်းသာလျှင်ပိုက်လာ။ ဘို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးစိတ် '' ဘီယာပုလင်း simulated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွဘို့ငါတို့ဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ တစ် screen ပေါ်မှာအလင်း flickering အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအဆိုပါထင်ယောင်ထင်မှားနောက်တဖန်ဘီယာပုလင်းထက်အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါပိုးမှဖြစ်ပါသည်, သေးဒစ်ဂျစ်တယ်ညစ်ညမ်းတက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တိုင်အောင်, CES နှင့်အတူတိုက်ဆိုင်မှ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းစည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုအချိန်ကုန်ဆုံးအရာ multi-ဒေါ်လာဘီလီယံစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်
ပင်ပိုကောင်းပျြောမှေ့စသောအရာတို့ကိုအောင်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ penchant သစ်ကိုအချည်းနှီးဖြစ်၏။ အနုပညာကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံးအကျင့်ကိုကျင့်၏အချို့ supernormal လှုံ့ဆော်မှုများ၏ရှေးဟောင်းအယူခံဝင်ဘို့သက်သေသာဓကသည်။ အချို့သော 25,000 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထုံးကြောကျမြားမှထွင်းထုခဲ့ကြခန့်မှန်း Willendorf ၏အဗီးနပ်စ်, အသေးစိတ် vulva နှင့်ပင်ယနေ့အချိုးကျ-တိုးမြှင့် porn ကြယ်ပွမျက်နှာမပျက်စေရန်လုံလောက်ကြီးမားသောရင်သားအပါအဝင်ပုံကြီးချဲ့ features တွေနှင့်အတူအမျိုးသမီးပုံသရုပ်ဖော်သည်။ သမိုင်းပညာရှင်ကိန်းဂဏန်းမျက်စိဖမ်းယူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုဆန္ဒများကိုနှိုးဆှဖို့ရည်ရွယ်အရာဝတ္ထု၏ရှည်လျားသောလိုင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးကြောင်း theorize ။ Willendorf ၏အဗီးနပ်စ်၏ဖန်ဆင်းရှင်သူပထမဦးဆုံးစျေးကွက်အကြားမှာလည်းပဲမသာကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးသိမ်းသွားလေ၏တဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
cavemen သူတို့ရဲ့ဆိုးဂူထွင်းထုခြင်းစတင်အစဉ်အဆက်ကတည်းကဒါပေမယ့်အလွယ်တကူ-အရူးလုပ်တိရိစ္ဆာန်များမှကျွန်တော်တို့ကိုခွဲထုတ်ထားတဲ့ supernormal လှုံ့ဆော်မှုများ၏သက်ရောက်မှုမှ counterbalances ရှိပွီ။ julodimorpha ကောင်လေးတွေအသေခံလူသားများလျင်မြန်စွာပညာရှိသ-up, သည်အထိမိမိတို့၏ချစ်ရာသခင်သည်ဘီယာပုလင်းနှင့်အတူ fornicate သွားရမည်အကြောင်း, ပျင်းရပေါ်ရွှေ့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးနှောက်ကိုအဟောင်း၏တာယာကိုသစ်ကိုထွက်ရှာအံ့သောငှါအရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ software ကိုတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းနှင့်အတူ Pre-installed လာကြ၏။ ဒါဟာ "hedonic လိုက်လျောညီထွေ" ဟုခေါ်ကရတဲ့အကြောင်းရင်းပါပဲရှင်ရဲ့ ထီဆုရရှိသူနှင့် paraplegics သူတို့သက်ဆိုင်ရာဘဝ-ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်ရပ်များမတိုင်မီခံစားခဲ့ရပျော်ရွှင်မှုကို၏တူညီသောအဆင့်ဆင့်မှပြန်ပြောင်းလေ့ရှိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေနှင့်ရင်သားအရွယ်အစား၊ သကြားဓာတ်ပါဝင်မှု (သို့) မျက်နှာပြင် resolution ကဲ့သို့သောအပေါ်ယံအသွင်အပြင်များအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆွဲဆောင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုဆန္ဒ၏အရာဝတ္ထု (များ) သည်အမြားအပွားဖြစ်လာသောအခါမှေးမှိန်သွားသည်။ ငါတို့နောက်ဆုံး i-ပစ္စည်းကိုခဏတာသဘောကျပေမယ့်မကြာခင်မှာပဲအဲဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှိုက်ပုံးကြီးထွားလာခြင်းမှာနောက်ထပ်ဖြည့်စွက်ချက်ပဲဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ အပေါ်ယံစရိုက်များကကျွန်ုပ်တို့ကိုဆွဲဆောင်နိုင်သော်လည်းသူတို့ဘာသာသူတို့ဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
သို့သျောလညျးမွနျမွနျလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားကိုကျနော်တို့ခုခံတွန်းလှန်ရန်အခက်ခဲဆုံးတွေ့ပါတ supernormal လှုံ့ဆော်မှုအားနည်းချက်ကျွန်တော်တို့ကိုရွက်။ ကျနော်တို့က julodimorpha ပိုးဒါမှမဟုတ် cuckoo ငှက်ရဲ့ဥ၏ဗိုလ်ခြေဆင်းရဲဒုက္ခမှာအောက်မှာခွေငျးငှါသော်လည်း, ငါတို့သည်အညီအမျှဖြားယောင်းကိုရှာဖွေတဦးတည်းသီးခြားစရိုက်များအားဖြင့် mesmerized ရုံကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ဒါဟာကျနော်တို့ကို CES မှာတိရစ္ဆာန်စုအတွက်တန်းစီခိုင်းတယ်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည် Apple ကစတိုးဆိုင်များနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံကကျနော်တို့ကိုပြောပြသည့်ဇာတ်လမ်းများနှင့်ကျွန်တော်ကစားသည့်ဂိမ်းထဲမှာ embedded အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံးစွန် supernormal လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ဝေးကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးစိတ်သက်ဆိုင်ရာအတိုင်း, အသစ်အဆန်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်မရှည်နိုင်သည့်သိချင်စိတ်သည်လူသားတို့၏အကြီးမားဆုံးသောသီလဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အားနည်းချက်များစွာ၏ရင်းမြစ်လည်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများစွဲစွဲလမ်းသူများသည်အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရန်နာရီပေါင်းများစွာအချိန်ဖြုန်းခြင်းဖြင့်ပုံရိပ်များကိုလှုံ့ဆော်ရန်ပိုမိုလိုအပ်သည်။ အနိုင်ကျင့်ခံရသည့်လောင်းကစားသမားများသည်အလားတူပြင်ဆင်မှုမျိုးရရှိရန်အတွက်ကြီးမားသောစွန့်စားမှုများနှင့်ပိုမိုကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများကိုခံစားရမည်။ ဤရွေ့ကားသင်တန်းများအစွန်းရောက်ဥပမာများဖြစ်ကြသည်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကငါတို့ရှိသမျှသည်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိ, "ပိုပြီး" ၏ insatiable ဝိဇ္ဇာအတတ်အားဆွဲဆောင်ပုံကိုသရုပ်ဖော်သည်။ အသစ်, အရာအသစ်သောကြောင့်, ၎င်း၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အလားအလာမဟုတ်ဘဲ၎င်း၏ဆင်ခြင်တုံတရားတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲဆောင်။
ဒေါက်တာ Barrett အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်း, ရေးသားခဲ့သည်နားလည်မှုကနေလာပါတယ်။ ကျနော်တို့လှုံ့ဆော်မှုလည်ပတ်ပုံကို supernormal အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် "ကျနော်တို့ခေတ်သစ်အကျပ်အတည်းများကအသစ်ချဉ်းကပ်မှုလက်မှုပညာများနိုင်ပါတယ်။ လူသားတွေဟာ Tinbergen ရဲ့ငှက်တို့သည်ကျော်တဦးတည်း stupendous အားသာချက်ရှိသည် - ဧရာဦးနှောက်။ ဤသည်ကိုခြုပျတညျးလမ်းလွဲကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းဗီဇအတိုင်းထပ်ရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ gaudy ထောင်ချောက်ကနေကိုယျ့ကိုယျကို extricate ဖို့ထူးခြားသောစွမ်းရည်ကိုပေးသည်။ "အမှန်စင်စစ်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောသူကအသိအမှတ်မပြုသောအခါအ supernormal လှုံ့ဆော်မှုများ၏ဆွဲထဲကနေကိုယျ့ကိုယျကိုအခမဲ့စတင်။
ဓာတ်ပုံ Credit: Darryl Gwynne, ဝီကီပီးဒီးယား, AskDaveTaylor, Patrick
porn သည်ပြaroundနာများနှင့်ပတ်သတ်သောဆက်ဆံရေးကိုအလွန်အမင်းပျက်စီးစေသည်ဟူသောအချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်အမှန်တကယ်အရေးကြီးသောစက္ကူအသစ် ... t.co/nJypIB8zwc
၇ ။ t.co/FfU5xQX6NA